इटहरीका मेयरलाई पत्रकार बिराटका ८ प्रश्न - SangaloKhabar
इटहरीका मेयरलाई पत्रकार बिराटका ८ प्रश्न
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि सार्वजनिक खरिद ऐन मिचिएको भनेकै हो। मेयरले पनि कर्मचारीका कारण भ्रष्टाचार भएको भनेकै हनु। यसै विषयमा मेयरले कर्मचारीलाई कारबाहीस्वरुप फाँट सरुवा गरेकै हुन्। त्यसको पक्षमा पत्रकार सम्मेलन देखि समाचार उठाउने मै हुँ। अनि म कसरी भ्रष्टाचारीको सहयोगी? इटहरीमा कर्मचारीतन्त्रको हालीमुहाली चिर्न मेयरले हिम्मत गर्नुपर्छ भन्दै चुनाव जितेपछि आमसञ्चारमा ब्लग लेख्ने म कसरी भ्रष्टाचारको पक्षधर?
मेयरसाप्लाई मेरा ८ प्रश्न
१. तपाईंले इटहरी ४ र ५ को सिमाना भएर बग्ने खेती खोलामा र स्यार्सेकाली पम्पको डोजर किन चाँडो बन्द गर्नुभयो? मिसन पूरा गर्न प्रेस, नगरबासी र आम मान्छेको सहयोग हुँदा पनि किन खेती खेला र स्यार्सेकाली पम्पमा डोजर चलाइ बन्द भयो?
२. तपाईंको इटहरी १७ को सडक नजिकै बनेको घरको कम्पाउन्ड नै सडक मिचेर बनेको छ। तपाईंले चुनाव लडेर चितेको साविक एमालेको पार्टी कार्यालय भवन पैनीमाथि छ। तपाईंको कार्यालय अगाडिको सहकारी भवन देखि कार्यालय आसपासका दर्जनौँ भवन बाटो, पैनी र सार्वजनिक जग्गा मिचेर बनेका छन्। तपाईंको पार्टीका नेताहरुले पनि सार्वजनिक जग्गामा घर बनाएको तपाईं आफंै भन्नुहुन्छ। ती किन हेर्नुहुन्न? किन भत्काउनु हुन्न? र एक्कासि धेरै परको डिभिएम स्कुलमै पढाइ भइरहेको समयमा कलिला विद्यार्थीमा डोजर आतंक गर्नुहुन्छ?
३. तपाईंका राम्रा कामको समर्थनमा आउने समाचारमा केही भन्नु हुन्न। तर, अलोचनात्मक पोस्ट र समाचारमा किन ‘हन्डी खाएर’ लेखेको भन्नुहुन्छ? आलोचनात्मक समाचार बनाउन अरूले हन्डी खुवाएको भनेजस्तै सकारात्मक समाचारमा तपाईं पनि हन्डी खुवाउनुहुन्छ ? लोकतन्त्रको कुरा गर्नुहुन्छ तर आलोचनात्मक समाचार सामग्री र सामाजिक सञ्जालका सार्वजनिक पदाधिकारीका लागि आउने जायज आलोचनासँग किन आक्रोशित हुनुहुन्छ? किन माफिया र भ्रष्टाचारीका पक्षको भन्दै भीड उचाल्दै आवाज दबाउन खोज्नुहुन्छ?
४. इटहरी खानेपानी उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष तथा तपाईंकै दलका नेता रामप्रसाद चौलागाईंले खानेपानीमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै सार्वजनिक रुपमा कयौँ पटक भन्नुभएको छ। तर, खानेपानीका सबै लेखा प्रतिवेदन तपाईंकै कार्यालयमा आउँछन्। किन एकएक बुँदा खोतलेर छानबिन गरेर प्रस्ट प्रमाणविना ‘अब त्यो कसरी मेयर बन्छ’ भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुहुन्छ? आफैं छानबिन गरेर सीधै दूधको दूध पानीको पानी बनाउने स्थानमा भए पनि किन स्टन्टमा जानुहुन्छ? २०७६ जेठ ६ गते नेकपा जिल्ला पार्टीका नेताहरुको शपथ ग्रहण समारोहमा भ्रष्टाचारीलाई कुटेँ भन्नुभयो। तपाईंले चौलागाईंले प्लटिङमा सँगै सेयर हालेर काम गरेको देखी एमाले अध्यक्ष केपी ओली लगायतका शीर्ष नेता सँगसँगै गएर भेटेको यस अगाडिसम्म निरन्तर थियो।
तपाईं जस्तो स्वच्छ मान्छे किन भ्रष्टाचारीसँग लसपसमा पर्नुभयो? वर्षौ संगत गरेको नेतालाई अब मेयर कसरी बन्छस् भन्दै कुटेँ भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन किन सक्रिय हुनुहुन्छ? प्रमाणित गरेर कारबाहीको बाटोमा किन जानु हुन्न? मिडियामा एकएक तथ्य र तथ्यांक ल्याएर किन दिनु हुन्न?
४. तपाईंको भ्रष्टाचार विरोधी कुरामा समर्थन छ। तर, भ्रष्टाचारी भएको अनुमानको आधारमा कि प्रमाणका आधारमा कारबाही गर्ने ? जस्तै तपाईंले २०७४ वैशाख २४ गते इटहरीका चानक पोखरेलकी श्रीमती रिता पोखरेलको नाममा बनेको घर सम्पन्न प्रमाणपत्र लिँदा घुस लिएको भन्दै सबइन्जिनियर राम खड्कालाई यही जेठ ८ गते निकाल्नुभयो। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा बोलाएर धकेल्दै निकाल्नुभयो। तर, तपाईंकै कार्यालयको दस्ताबेजले खड्का २०७५ साउन ३ गते मात्रै उक्त फाँटमा आएको देखाँउछ। र, घरधनी रीता पोखरेलले समेत मैले घुस दिएको छैन र सम्पन्न गर्न कृष्ण खड्का हैन तपाईंकै आफन्त पर्ने मनोज चौधरी आएको भन्नुभएको छ।
जेठ आठै गते नासु मनोज दाहाललाई सिएफएलमा भ्रष्टाचारी भन्दै कुट्नुभयो। मोबाइल खोस्नुभयो। आफू चाहिँ अख्तियारले क्लिच चिट दियो भन्दै हिँड्ने तर क्लिन चिट दिइएका कर्मचारीलाई चै किन भ्रष्टाचारी भन्दै कुट्नुहुन्छ ? प्रमाणसहित रंगेहात हान्ने सञ्जाल र राजनीतिक नेतृत्व भए पनि किन हिंसामा उत्रनुहुन्छ?
५. तपाईं मितव्ययिताको कुरा गर्नुहुन्छ। तर गैरकानुनी रुपमा पद खडा गरेर कार्यालयमा पत्रकार नियुक्त गर्नुभएको छ। यसमा के कुराको भूमिका छ? मेयर भएर आएकै वर्षको पुस १९ गते किन तपाईं युनिफिकेसन चर्चको कार्यक्रममा शान्तिदूत बन्ने नाममा उपमहानगरको पैसा खर्च गरेर जानुभयो? व्याक्तिगत फाइदाको काममा किन स्थानीय सरकारको पैसा खर्च गर्नुभयो?
६. तपाईं आफूलाई थारू अगुवा भन्नु हुन्छ तर मैले र केही थारु अभियानकर्मीले इटहरीका भूमिपुत्र थारूलाई प्रथम नागरिक घोषणा गरौँ भनेर प्रस्ताव गर्‍यौं। दमकले धिमाल गरेको छ इटहरीले थारु गरौँ भन्दा तपाईं किन मान्नु हुन्न? बहुसंख्य कार्यपालिका सदस्य र थुप्रै शुभेच्छुकहरु सहयोगमा हुँदा पनि यो घोषणा गर्न केले रोकेको छ? यस्तो आफ्नो जातिका पक्षमा आएका जायज कुरामा केही नगर्ने तर ‘बाहुक कुटे’, ‘बाहुनको खुन खान्छु’ जस्ता उत्तेजक भनाइ किन आउँछन् तपाईंको मुखबाट?
७. आफूले काम गर्न चाहेर पनि नपाएको भन्नुहुन्छ। तपाईंले मेयर भएर आउनेबित्तिकै इटहरी बजारमा सार्वजनिक शौचालय बनाउने कुरा गर्नुभएको थियो। २ बर्ष पुग्न लाग्दा पनि किन बनेन?
८. तपाईं किन पत्रकार, कर्मचारी, सेवाग्राही र संविधानसँग विमति राख्नुहुन्छ? आलोचनात्मक पत्रकारलाई पत्रुकार/चाटुकार भन्ने, झोक चलेका सेवाग्राहीको निवेदन च्यात्ने, नेकपा नेतादेखि कर्मचारी कुट्ने काममा किन जोस चल्छ? संविधानलाई बर्जुवा, अदालतलाई कायर भन्दै राज्यसंयन्त्रको खिल्ली उडाएर गुण्डाराज प्रवद्र्धनमा तपाईंको सक्रियता किन? सामाजिक सञ्जालमा समेत आफूभन्दा फरक मत आउनेलाई तथानाम किन गाली गर्नुहुन्छ। योगेश भट्टराईले माफी माग भनेको समाचार सेयर गर्ने नवीन कट्वालको कमेन्टमा गएर ‘मेरो तर्फबाट उसैले मागोस्’ भनेर किन नेताहरुको अनादर गर्नुहुन्छ?
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ २४, २०७६ समय: १५:५०:३१